Red dot Pay - Red dot Network
Red dot Pay အကြောင်း
Red dot နဲ့အတူပူးပေါင်းလိုက်ပါ
Red dot Pay ဆိုသည်မှာ
Red dot Pay ဖြင့် အွန်လိုင်းပေါ်မှ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဝယ်ယူခြင်းများအတွက် ငွေပေးချေခြင်း နှင့် လစဉ်ကြေး ပေးဆောင်ခြင်းများကို နီးစပ်ရာ Red dot ဆိုင်များ တွင် လွယ်ကူစွာ ပေးချေနိုင်ပါသည်။
လစဉ်ကြေးပေးဆောင်မှုများကို လွယ်ကူစွာ ပေးဆောင်နိုင်ခြင်း
လစဉ်ကြေး ပေးဆောင်မှုများကို နီးစပ်ရာ Red dot ဆိုင်တွင် အလွယ်တကူ ပေးဆောင်နိုင်ပါပြီ်။
Credit Card မလိုပဲ အွန်လိုင်းမှ ဝယ်ယူခြင်း
Credit card မလိုပဲ အွန်လိုင်းမှ ပစ္စည်းဝယ်လိုပါသလား။ စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ Red dot Pay နှင့် နီးစပ်ရာ Red dot ဆိုင်တွင် ကျသင့်သော ပမာဏကို ပေးချေနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်း မှဝယ်ယူသော ပစ္စည်းများ ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ အတွက် ငွေပေးချေလိုပါသလား။ လစဉ်ကြေး များကို အသစ်ပြန်လည် သက်တမ်းတိုးချင်ပါသလား။ Red dot ဆိုင် တစ်နေရာတည်းတွင် အားလုံး အတွက် ငွေပေးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Red dot ဆိုင်တိုင်းတွင် Pay PIN များ ရရှိနိုင်ပြီ
Pay PINs မိတ်ဆက်
နီးစပ်ရာ Red dot Store ဆိုင်ကို သွားရောက်၍ လိုအပ်သော Pay Pin အရေအတွက်ကို ဝယ်ယူပါ။
Pay Pin ကို အသုံးပြုပြီး လိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန် Online website (သို့) apk ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။Online Website (သို့) apk မှ ဖော်ပြထားသော လမ်းညွှန်ချက်များ အတိုင်း ပြုလုပ်၍ Pay PIN ကို ဖြည့်သွင်းပြီး လိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို ရယူပါ။
Please read terms and conditions for Red dot Pay Pin
Red dot Pay ဖြင့်ဘာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲ?
လစဉ်ကြေး ပေးချေနိုင်သော ကုမ္ပဏီများ
Pay PIN ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သော ကုမ္ပဏီများ
သည် Red dot Pay ကို အထောက်အပံ့ ပေးသော ဘဏ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
What do other people think of Red dot Pay?
Phoo Pyae Khant
များသောအားဖြင့် Customerများသည် မိုဘိုင်းလ် ဂိမ်းအတွက် Pay PIN များ လာရောက်ဝယ်ယူကြပြီး လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ Pay PIN များကို Red dot စက် ဖြင့် ရောင်းချပေးနိုင်တဲ့အတွက် ကျွန်မ အတွက်ရော customers အတွက်ပါ အလွန်အဆင်ပြေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။
Red dot Pay PIN ကို My Fish၊ Mobile Legends တို့အတွက် မိုဘိုင်းလ် ဂိမ်း credits နှင့် Steam Wallet အတွက် အသုံးပြုနေသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ နောင်တွင်လည်း အခြားဂိမ်းများ အတွက် pay PIN ဝန်ဆောင်မှု ပေးဆောင်နိုင်လိမ့်မည် ဟု မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Red dot Pay PIN ကို iflix အတွက် လစဉ်ကြေးပေးချေရာတွင် အသုံးပြုဖြစ်ပါတယ်။ နီးစပ်ရာ Red dot ဆိုင်တွင် အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့အပြင် လစဉ်ကြေးပေးချေရာတွင်ရော မိုဘိုင်းဂိမ်း credit အတွက်ပါ Red dot Pay ကို အသုံးပြုလို့ရတဲ့ အတွက် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိပါတယ်။
အနီးဆုံး Red dot ဆိုင်အား ရှာဖွေပါ။
Red dot ဆိုင် (၂၁,၀၀၀) ကျော် တွင် မိမိတို့ရဲ့ လစဉ်ကြေးများ၊ အွန်လိုင်း ဂိမ်းငွေကြေးများ ဝယ်ယူခြင်း နှင့် အခြား အွန်လိုင်း ငွေပေးချေမှုများကို Red dot နဲ့ ပေးချေနိုင်ပါတယ်။
Red dot Pay ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်လိုပါသလား။ Customer Care ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ (ဖုန်း +95 1 370050 Viber +95 97963 47015) (သို့မဟုတ်) “ပိုမိုသိရန်” ကို နှိပ်ပြီး ဝင်ကြည့်ပါ။